Kiineyska Iswiidhen dalxiiska u yimaada oo soo badanaya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kiineyska Iswiidhen dalxiiska u yimaada oo soo badanaya
La daabacay tisdag 12 november 2013 kl 16.06
Iswiidhen iyo dalalka kale ee waqooyiga Yurub waxay watiyadaan dambe soo jiitaan dadka dalxiiska uga yimaada dalka Shiinaha. Sannadkii 2012 waxaa dadka ugu yaraan habeen seexda Iswiidhen booska 13aad kaga jirey dadka ka soo dalxiis-taga dalka Shiinaha. Marka la eego dadka ka yimaada Yrub bannaankeeda waxay dadka shiineysku ku jiraan booska labaad oo waxaa ka horreeya dadka ka yimaada Maraykanka.
Waxyaalaha dadka shiineyska ku soo jiita Iswiidhen waxaa ka mid ah nolosha casriga ah, farsamada naqshadeynta iyo hawo nadiif ah. Sannadkii la soo dhaafay waxaa Iswiidhen dalxiis u yimid dad tiradoodu gaareyso 163 kun oo qof, waana tiro boqolkiiba 62 ka badan tiradii sannadkii 2008. Sannadkaana intii u dhexeysey bilihii Juun iyo Sebteember oo qura waxaa yimid 158000 oo shiineys ah ugu yaraan hal been seexday Iswiidhen. Taasina waxay noqoneysaa koror dhan boqolkiiba 22 marka la barbardhigo sannadkii hore.
Guud ahaan dadka shiineysku aragti wanaagsan ayey ka haystaan Iswiidhen iyo dadkeeda, ayuu Thomas Brühl, oo agaasime guud ka ah shirkadda dalxiiska ee Visitsweden.
Badanaaba socdaalada dadka shiineyska ahi kuma ekaadaan Iswiidhen, ee waxay kaloo booqdaan dhulka buuraleyda ah ee Noorwey. Kuwo badan oo dadkaas ka mid ahina waxay booqasho gaaban ku tagaan magaalada Koobenheegan inta ay dalxiiska ku jiraan. Celceliska ay dadkaasi Iswiidhen ku joogaan ayaa gaara laba habeen iyo hal maalin ama laba maalmood iyo hal habeen.